Lyell’s syndrome : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေး ကို လူတိုင်းထိုးထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါက သေဆုံးနိုင်သည်အထိ ပြင်းထန်တာကြောင့်ပါ။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 29, 2021 .2mins read
ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်လွယ်တယ်ဆိုပေမယ့် တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရောဂါတော်တော်များများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ ရနေပါပြီ။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 .3mins read
အချို့ မိဘတွေက ဘေဘီလေးကို နာကျင်မှာစိုးတဲ့ စိတ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှ ကလေးဖျားသွားဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကာကွယ်ဆေး မထိုးပေးတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 3, 2021 .2mins read
စိတ်ပူပင်လို့ ရင်တုန်လာတာလား… နှလုံးရောဂါလား….